openELEC: zvese zvaunoda kuti uzive nezve ino multimedia nzvimbo | Mahara emahara
openELEC: zvese zvaunoda kuti uzive nezve ino multimedia nzvimbo
OpenELEC ndiyo imwe yenzvimbo dzinozivikanwa dzekuparadzirwa kweGNU / Linux yakanangana nekushandisa yakazara multimedia nzvimbo. Yakanga yakagadzirirwa HTPCs (Kumba Theatre Yemunhu Computer), ndiko kuti, ye miniPCs inotarisirwa kuvaraidzo yemultimedia mumba mako yekutandarira.
Uyezve, OpenELEC, senge mamwe masisitimu akafanana, inogona zvakare kuiswa pane iyo SD yeSBC senge Raspberry Pikuva chiteshi chezvenhau chakachipa uye nezvose zvaunoda pane yako yekutandarira TV ... Saka kana iwe wanga usingazive nezvazvo, ikozvino unogona kuwedzera OpenELEC kune iyo rondedzero ye anoshanda masisitimu eRaspberry Pi.
1 Chii chinonzi multimedia centre?
2 Nezve OpenELEC
3 Isa pane yako Raspberry Pi
Chii chinonzi multimedia centre?
Un multimedia nzvimbo, kana midhiya-pakati, ndeyekuitisa umo iwe unogona kunakirwa nemhando dzese dzemultimedia zvemukati. Izvi zvinoreva kutamba mimhanzi, mabhaisikopo, kuratidza mifananidzo kubva kumabharari, kupinda paInternet, uye kunyangwe kushandisa mamwe mabasa kuburikidza nekuwedzera nemawedzera-ons (TV chiteshi, radio,…).
Aya multimedia nzvimbo ari chaizvo zadzisa mashandiro ekushandisa pamwe nesoftware yekugona kuita ese aya mabasa, kuwedzera kune anodikanwa madhiraivha uye macodec.
Microsoft Windows Media Center Yakanga iri imwe yematanho ekutanga erudzi urwu kuve akakurumbira, uye kunyangwe yaive isingagamuchirike zvakanyanya panguva iyoyo, yaizoisa hwaro hwehurongwa hwazvino, kunyanya mashandiro aripo nhasi mumavhidhiyo consoles, pamwe nezvirongwa zve chimiro cheKo, LibreELEC, OSMC, kana OpenELEC pachayo ...
OpenELEC ndeyeLinux-yakadzika yakamisikidzwa inoshanda sisitimu yevaraidzo yedhijitari. Izwi rayo rinobva kuOpen Embedded Linux Entertainment Center. Uye zvakare, iyi diki distro inotevera iyo JeOS (Just Enough Operating System) musimboti, ndiko kuti, minimalist inoshanda sisitimu iyo inongori nezvakanaka uye zvinodikanwa nechinangwa chayakagadzirirwa.
Iyi chikuva haina kuvakirwa pane imwe, asi yakagadzirwa kubva pakutanga uye neanozivikanwa Yakabatanidzwa Kodi, chimwe chinhu chinojairika kune mamwe akawanda mapuratifomu akafanana neOpenELEC. Uye kwete yeiyo iri pasi pevamwe, kutaura zvazviri yakapihwa mabhenefiti ayo ...
Kana iwe uchinetseka nezve zvaunogona kuita OpenLEC, chokwadi ndechekuti anotevera mabasa anomira pachena:
Ane a vhidhiyo mutambi uye murongi yezvinyorwa uye mabhaisikopo aunazvo mune vezvenhau aunogona kuwana. Uye zvakare, iyo inokutendera iwe kusarudza zvinyorwa zvidiki, kuratidza vhidhiyo ruzivo, uye kugadzira mamwe marongero ekutanga.
Iyo zvakare ine maneja weTV, kuitira kuti iwe ugare uchigona kuchengeta ako aunofarira episodhi kuti asvike, ona tsananguro, genre, vatambi, uye rumwe ruzivo rwunowanikwa online.
Mufananidzo browser inosanganiswa neayo iwe yaunogona kuona iyo mifananidzo yawakachengeta uye uchiisa iwo mumaraibhurari sezvaunoda. Iyo ine mabasa ekuona imwe neumwe, yemasiraidhi maitiro, zoom, kutenderera, nezvimwe.
Chokwadi anobvuma tamba mafaera ekuteerera, nevatungamiriri venziyo dzako dzaunofarira, mabhuku ehurukuro, nezvimwe. Ivo vanogona kuverengerwa nealbum, muimbi, nezvimwe.
Kana uchida, inogona kuratidza TV chiteshi uye zvakarekodha vhidhiyo kuchengetera ako aunofarira mashoo uye uatarise iwo chero paunoda.
zvimwe: OpenELEC zvakare ine epamberi system yekuwedzera kugona kwayo nekuisa addons. Navo unogona kuwedzera migero, zvishandiso zvekushandisa pamba, maturusi ehuwandu hwemabasa, makanda matsva kana madingindira, nezvimwe.
Mamwe mashoko - OpenELEC Yepamutemo Webhusaiti
Isa pane yako Raspberry Pi
Kana iwe uchida gadza OpenELEC pane yako Raspberry Pi (uye zvimwe zvishandiso), maitiro ekuzviita akapusa. Iwe unongofanirwa kutevera mashoma mashoma matanho.
Chokutanga unofanira download mufananidzo kuisa OpenELEC. Iwe unofanirwa kuzviita kubva kune yepamutemo webhusaiti, mu download nzvimbo.
Paunenge uripo unogona kusarudza pakati pe .tar mafaera ane zvigadziriso zvekubva pane imwe vhezheni kuenda kune imwe kana uchinge watova neOpenELEC, kana .img mafaera ari iwo mufananidzo wakazara kuti uuise kekutanga. Sarudza chikuva chaunoda kurodha mufananidzo wacho, senge Raspberry Pi, Freescale i.MX kana Generic (yeX86-64 PC), uye tora iyo .img.tar kubva pane yazvino vhezheni yakagadzikana. Kuti uite izvi, ingotinya pane bhatani reDisk Image iro rinoonekwa uye mirira kuti ripedze.
Zvino, kubva pakombuta kuti iwe wakadhirodha iyo, uchafanirwa gadzira iyo yepakati OpenELEC yekumisikidza chirongwa, senge USB tsvimbo, kana SD kadhi, angangoita 256MB kana kumusoro. Kuti uite kudaro unogona kushandisa chirongwa Etcher.
Paunenge iwe wabhenekera iyo SD kadhi, iwe unogona kuiisa mukati meiyo slot yeRaspberry yako Pi uye ita bhuti rekutanga. Mariri, inokumbira iwe kumisikidza mamwe ma paramita senge mutauro, nguva, nezvimwe. Ukangopedza ne wizard, iwe unozogona kunakidzwa neOpenELEC mukuzara kwayo.
Rangarira kuti kana uchizoriisa paPC, ipapo unofanirwa kusarudza sarudzo muBoot chikamu muBIOS / UEFI yako kubhoot kubva pane iyo yawakagadzira, mune ino USB ...
Iye zvino unogona kunakidzwa yezvose zvemultimedia zvemukati zvaunoda neOpenELEC ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Raspberry Pi » openELEC: zvese zvaunoda kuti uzive nezve ino multimedia nzvimbo
VU mita: chii icho uye chingashandiswa sei chishandiso ichi